Njikwa ngwaahịa: ịgbachi nkịtị bụ ihe ịga nke ọma nke na-agabigaghị akwụ ụgwọ | Martech Zone
Bụ onye njikwa ngwaahịa maka Inc 500 SaaS ụlọ ọrụ anọwo na-emezu ma na-enweghị atụ.
A jụrụ m otu oge ma ọ bụrụ na ọnọdụ ọzọ dị na ụlọ ọrụ m ga-achọ ịnwe… n'eziokwu, ọ dịghị ọnọdụ ka mma karịa Njikwa Ahịa. Echere m na ndị njikwa ngwaahịa na ụlọ ọrụ ngwanrọ ndị ọzọ kwenyere. Ọ bụrụ n ’ị na-eche ihe Onye njikwa Ngwaahịa na-eme, nkọwa ọrụ dị iche iche site na ụlọ ọrụ gaa na ụlọ ọrụ.
N’ebe ụfọdụ azụmaahịa, onye na-ahụ maka ngwaahịa na-eduzi ma nwe ngwaahịa ya ma na-aza ajụjụ maka ọganiihu ma ọ bụ ọdịda nke ngwaahịa a. N'ebe m na-arụ ọrụ, onye na-ahụ maka ngwaahịa na-eduzi, na-ebute ụzọ, ma na-enyere aka ịhazi atụmatụ na ndozi na mpaghara nke ngwa ọ na-ebu.
Ndo bụ Golden
Enwere ike ịgụta ihe ịga nke ọma na dollar na cent. A na-atụkarị ya na gbachi nkịtị. Dollar na cents ga-agwa gị otu asọmpi atụmatụ gị dị na ụlọ ọrụ ahụ, mana ịgbachi nkịtị bụ ihe ịga nke ọma n'ime nke ọma:
Ngbachi nke ndi otu ogugu guru ihe ndi ichoro gi na ihe eji eme ihe ma nwee ike ighota ma mejuputa ha.
Ngbachi nke ndi otu ahia gha amata uru nke ahia gi ma gosiputa ya na ihe omuma.
Ngbachi nke ndi otu ahia ndi n’ere ahia n’ile anya ndi choro njirimara gi.
Ndopu ndi otu ntinye okwu nke gha akowa ihe gi ma mejuputa ha na ndi ahia ohuru.
Ndopu si ndi otu oru ndi ahia gha aghaza oku ekwenti ma kọwaa nsogbu ma ọ bụ nsogbu metụtara atụmatụ gị.
Ndopu si ndi otu oru ndi agha nke gha aghale ihe ndi oru gi gha etinye na sava na bandwidth.
Ngbachi nkịtị sitere na ndi otu ndi ndu nke ndi ahia n’adighi eme mkpesa banyere mkpebi gi.
A naghị akwụghachi nkịtị maka ịgbachi nkịtị
N'ezie, nsogbu nke ịgbachi nkịtị bụ na ọ dịghị onye hụrụ ya. Enweghị ike ịtụle ịgbachi nkịtị. Gbachi nkịtị adịghị enweta ego ma ọ bụ nkwalite. Enweela m ọtụtụ nkwupụta ndị ọzọ ugbu a ma ejirila ịgbachi nkịtị gọzie m. Ihe njiri mara m rụkọrọ ọrụ na ndị otu mmepe iji mepụta ma mejuputa emeela ahịa ndị ọzọ na enweghị abawanye na nsogbu ndị ahịa.
Enwetụbeghị mgbe a ghọtara maka nke a… mana m dịkwa mma na nke ahụ! Obi siri m ike na ikike m karịa ka m nwetụworo. Ọ bụrụ na ọdụ ọdụ ahụ agbachi nkịtị, enwere m ike ijide gị na enwere ọtụtụ mkpọtụ na ngwụcha njedebe. Bụ onye njikwa ngwaahịa na-aga nke ọma chọrọ oke agụụ na ịchọrọ na usoro nhazi nke ịhapụ na ụzọ. Dịka Onye njikwa ngwaahịa, ị na-ahụta onwe gị na ndị njikwa ngwaahịa ndị ọzọ, ndị isi, ndị mmepe, yana ndị ahịa.
Ọ bụrụ na iguzoroghị nyocha na mkpebi gị, ị nwere ike itinye ndị ahịa gị, atụmanya gị, na ọdịnihu nke ụlọ ọrụ gị na ngwaahịa gị n'ihe egwu. Ọ bụrụ n ’ị sị ee ee idu ndu ị chọrọ ma ọ bụ ndị nrụpụta chọrọ, ị nwere ike ibibi ahụmịhe ndị ọrụ gị. Oge ụfọdụ ị nwere ike ịchọta onwe gị ọbụlagodi na esemokwu gị na onye isi gị na ndị ọrụ ibe gị.
Njikwa ngwaahịa abụghị ọrụ maka mmadụ niile!
Nke ahụ bụ nnukwu nrụgide ọ na-achọ ndị mmadụ nwere ike ịrụ ọrụ site na nrụgide ahụ ma mee mkpebi ndị siri ike. Ọ dịghị mfe ile ndị mmadụ anya n’ihu ma gwa ha na ị na-agagharị n’ụzọ dị iche na ihe kpatara ya. Ọ chọrọ ndị ndu siri ike ga-akwado gị ma jide gị maka ihe ịga nke ọma ma ọ bụ ọdịda nke ngwaahịa gị. Ndị ndu ndị tụkwasịrị gị obi ime mkpebi ndị kwesịrị ekwesị.
Ọ na-achọkwa ekele maka ịgbachi nkịtị.
Enweghị m ike ikwenye gị karịa. PM kachasị mma bụ ndị anaghị enweta mmata.
Doug ị kpọgidere ya na post a. Ọ bụ ezie na ụfọdụ na-achọsi ike nzaghachi (m na-eme), ịgbachi nkịtị bụ ụdị nzaghachi nke a na-adịghị atụle. Na ude? Ọtụtụ ndị njikwa anaghị eleghara ngwa ọrụ HR anya, n'amaghị etu okwu ọma dị mfe nwere ike isi metụta mmụọ ndị ọrụ ha.
Na-akpali mmasị! Agaghị amata na ịgbachi nkịtị dị mma karịa ka amata ya dị ka onye na-akọcha ihe niile - ebe ọ na-eme mkpọtụ. Ka ga-enwe ọrụ n’ụtụtụ! Ma, ị ka na-eme mkpọtụ, gbaa mbọ hụ na ndị mmadụ mara na ị ka na-agba ụkwụ.
Ọkt 12, 2008 na 8:43 PM
Sir, ịgbachi nkịtị nye m bụ àgwà nke na-enweghị isi. Gwọ ọrụ maka ịgbachi nkịtị bụ ihe doro anya mana ọ bụrụ na ọ gakọrịta na agwa na ọrụ mmadụ mere… Bụrụ mpaghara Mmepe Ngwaahịa ma ọ bụ ihe ọzọ…